eHimalaya Online || News from nepal » विश्वको कान्छी अर्बपती काइली जेनरको बोल्ड फोटोशुटको चौतर्फी चर्चा हेरौ १२ तस्बिरमा ।
२०७८ मङ्सिर १३ गते सोमबार || 2021 Nov 29 Monday
विश्वको कान्छी अर्बपती काइली जेनरको बोल्ड फोटोशुटको चौतर्फी चर्चा हेरौ १२ तस्बिरमा ।
२०७८ जेठ २४ गते सोमबार १२:०५
हलिउड अभिनेत्री काइली जेनर बोल्ड तस्विरका कारणले प्रायः चर्चामा रहने गर्दछिन् । उनी हरेक दिन फ्यानहरुका लागि हट तस्बिर समेत शेयर गर्ने गर्दछिन् । जसलाई फ्यानहरुले प्रेम समेत बर्षाउने गर्दछन् । हालै पनि उनले आफ्नो बोल्ड तस्बिर...
हलिउड अभिनेत्री काइली जेनर बोल्ड तस्विरका कारणले प्रायः चर्चामा रहने गर्दछिन् । उनी हरेक दिन फ्यानहरुका लागि हट तस्बिर समेत शेयर गर्ने गर्दछिन् । जसलाई फ्यानहरुले प्रेम समेत बर्षाउने गर्दछन् ।
हालै पनि उनले आफ्नो बोल्ड तस्बिर शेयर गरेकी छन् । उनको हरेक लुक्स सामाजिक संजालमा निकै भाइरल हुने गर्दछ । तस्बिरमा जेनर ट्रान्सपेरेन्सी स्किनफिट ड्रेसमा देखिएकी छन् । जसमाथि उनले कोट समेत लगाएकी छन् ।
यो लुक्समा जेनरले सोफामा बसेर समेत निकै ह,ट पोजमा तस्बिर खिचाएकी छन् । यो तस्बिरमा उनी निकै ह,ट र आकर्षक देखिएकी छन् । कामको कुरा गर्ने हो भने जेनर पछिल्लो समय २०२० मा ‘फादर सोल्डर सन’मा देखिएकी थिइन् । आउनुहोस हेरौ पछिल्लो समयमा दर्शकहरुले अत्यधिक रुचाएका काइलीका केही सुन्दर तस्बिरहरु..
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ २४ गते सोमबार १२:०५
यस्तो ह,ट अ,वतारमा मुसुक्क मुस्कुराएर ल,ठ्ठ पारिन फ्यानहरुलाइ अभिनेत्री जान्भी कपुरले। हेरौ यी १४ तस्बिरमा।
अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले बे,डरुम से,क्रेट सेयर गर्दै, भन्छिन” निकले मलाइ रा,तभरी……..!
वलिवूडकि कान्छी अभिनेत्री जान्भी कपूरले ब्ल्याक सुटमा देखाइन स्टाइलिस्ट शैली (फोटोफिचर)
बिहेपछि झनै सुन्दरता बढदै वलिवूड नायिका काजल अग्रवाल हेरौ केही तस्बिरमा ।
रातो ओ,पन कोट मा यति धेरै हट एन्ड से,क्सी देखिइन। सेल्फी क्वीनको नामले चर्चित गायिका नेहा कक्कड। हेरौ नेहाका केही ह,ट तस्बिर !
फिल्ममा डेब्यु नगरेपनी बोल्ड फोटोशुटका कारण चर्चामा आउने अमिर खानकि छोरी इरा खानको बोल्ड अवतार हेरौ १० तस्बिरमा ।
ब्लाउज बिना साडी लागाई आगो लागाईन मौनीले हेरौ १० तस्बिरमा ।
नेपालकी सनि लियोनी भनी चर्चामा अदिती उनको हट एन्ड बोल्ड लुक्सको चौतर्फी चर्चा..हेरौ १३ तस्बिरमा ।
फेसन र स्टाइलमा सधै अगाडि देखिने ४५ बर्षिय शिल्पा शेट्टीले पाइन्ट लगाउन बिर्सेकै हुन त? आफ्नो छोराले समेत यस्तो भनेपछी……..
४७ बर्षमा पनि अहिले सम्मकै निकै बोल्ड लुक्समा देखिइन मलाईका अरोरा हेरौ १४ तस्बिरमा ।
२०७८ मङ्सिर १३ गते सोमबार ०९:३०
२०७८ मङ्सिर १३ गते सोमबार ०२:५६
२०७८ मङ्सिर १२ गते आईतबार ०७:३४
२०७८ मङ्सिर १२ गते आईतबार ०३:३४
© 2018 - सर्वाधिकार सुरक्षित @ www.ehimalayaonline.com